Merobichar (मेरो बिचार): बर्माको बिपति
सुन्दर मानब सँसारमा कहिलेकाहि अकल्पनीय घटनाहरू घटिदिन्छन। हेर्दाहेर्दै एउटा रमाइलो दुनिया नारकीय समसानमा बदलिन्छ। मानछेका झुटा अहंकारहरू, बिज्ञानका चमत्कारहरू नीरिह बनिदिन्छन यस्ता घटनाका सामू। इतिहासको कालखन्डमा तेस्ता धेरै तीता सत्यहरूले मान्छेको मन रूबाएको छ। तीनका बस्तिहरू उजाडेकोछ। चाहे त्यो सुनामीको नाममा होस्, या कार्टिना चाहे भर्खरैको चक्रबर्ती नरगिस।
पर्किती बलबती छ। क्षणभरमा बिपत निम्त्याउन। हराभरा प्रक्रितीलाई किन यतिबिग्न रीस उठ्छ? दुनिया उजाडने गरि आज मान्छेले सोच्नुपर्ने गम्नुपर्ने बेलाभइसकेको छ। प्राक्रितीक प्रकोप सानो ठूलो सबैले भोगेकै कुरा हो। जब यस्ले बस्तीका बस्ती सखाप पार्छ हजारौ मान्छेको जीवनलीला समाप्त गर्दछ त्यतिखेर अन्तराष्टिय रूपमा मानवीय सदभाब सहयोगको खाँचो पर्दछ।
राजनीतीक रूपमा सैनीक तानासाहीको बिपती सहिरहेका बर्मेली जन्ताहरू यतिखेर प्राक्रितीक विपत्तीको अर्को चपेटामा परेकाछन नराम्रोसँग। एसियाको सानो राष्ट बर्मा यानी म्यान्मारमा गत ३ मे 2008 मा १९० किमी प्रतिघन्टाको दरले आएको चक्रबर्ती नरगिसले ल्याएको सामुन्द्रिक तूफानले गाउ र शहरहरूनै बडार्यो। यो सँसारकै अहिलेसम्मको डरलाग्दो तूफान हो। जसबाट मर्नेहरूको सँख्या ५०,००० पुगेको बताइन्छ।
हजारौको संख्यामा हराइरहेकाहरूको कुनै लेखाजोखा छैन। स्थानीय संचार माध्यमहरूले जनाए अनुसार बोगाले, लापुतामा धेरै बिनास भएकोछ।शहर पूरै चिहानमा परिणत भएझै लाग्दछ। यातायात, बिजुली, संचार र खानेपानी सबै क्षतबिक्षत भएकोछ। ढलेका रूखहरू, उडाएका छानाहरू, भत्केका घरहरूको वीचबाट देखिने बिभत्स द्रिस्यले बर्मेलीहरूलाई दनियाभरिको सहानुभूती प्राप्तछ। लाखौ मान्छेहरू घरबारविहीन भएकाछन्। खानेपानी, औसधीमूलो र खानाको अभाव टडकारो छ।
वाडिले डुबाएका क्षेत्रमा हैजा, मलेरिया र टाइफाइड जस्ता रोगको संक्रमण बडने देखिन्छ। लाखौका संख्यामा राहातका सामाग्रि पर्खेर बसेका नीरीह मान्छेहरूका भीडकासामू बर्मेली सैनिक सरकार लाचार छाया भइरहेछ। देशले भोगेको यस्तो दूखद् बिपत्ती भन्दा पनि उसलाई जनमतबाट अनुमोदित हुने हतारो देखिन्छ।
अति प्रभाबित इराबदी क्षेत्र लापूताका ७५% घरहरू धोस्त भएकाछन्। बाकिका छानाहरू उडाएकोछ।
पूरै क्षेत्र जलमग्न देखिन्छ। आँधिबेहरिको यो प्रभाबले खाध्यान्नको मूल्यलाई आकासेकोछ।
यधपि आँधिल्याएको पूर्ण बिवरण आइपुग्न अझै कैयौ दिन लाग्न सक्छ।
बर्माको विपत्तीप्रति सँयुक्त राष्ट्रसँघका महासचिव बानकी मूनले दूख ब्यक्त गर्दै १८ करोढ ७० लाखको सहयोगको अपील गर्दै यो जारि रहने बताउनु भयो। अमेरिका, यूरोपीय संघ, बेलायत, जापान, भारत, थाइलेन्ड लगायतका राष्ट्रहरूले सहायताहरू पठाउने क्रम जारिछ। बिश्व खाध्य संगठनले बर्मेली सरकारसंग राहत बाडने कुरामा बिवाद पछिपनि यो क्रमलाई निरन्तरता दिइरहने जनाएकोछ।
रेडक्रस, अक्सफाम, सेभ दि चिल्द्रेन जस्ता मानबीय संस्थाहरू ''बर्मसाइक्लोन अपील'' का रूपमा लागिपरेकाछन्। बर्माको राजनीतिक संग असन्तुष्ट अन्तराष्ट्रिय समुदाय ती कुराहरूलाई बिर्सेर सहयोग, सद्भभाबको मानबीय सेबामा आतुर देखिन्छन्। तथापि बर्माका सैनिक जनरलहरू बिदेशीहरूलाई प्रबेशाज्ञा भिसामा ढिलाइ, राहातको बितरणमा किचलो थापेर सबैकासामूबाट गिरिरहेकाछन्। बिदेशीहरूलाई रिपोटिङ्ग गर्न नदिएर घटनालाई लुकाउन खोज्नुले बर्मेली जुन्ताको बास्तबिक मनोदशालाई प्रस्ट्याउदैन र? देश पूरै महाप्रकोपमा रोइरहदा समेत बेबास्ता गरेर कथित चुनाब सम्पन्न गर्नुले उनीहरूको कुत्सित
हामी सबैले कामाना गरौ बर्मेली जन्ताको यो दूख हामीसबैको हो। अन्तराष्ट्रिय रुपमा आएको
सबै राहत सामानहरू सहयोगहरू यथासिघ्र पीडित,प्रताडीत समूदायसम्म पुगोस्। माहामारीजन्य संक्रमणमा फेरि अरू थपले ज्यान गुमाउन नपरोस्।घरबारबिहीनहरूलाई यथोचित पूनर्वासको ब्यवस्था होस्।
संसारमा आइरहने यसप्रकारका दैबीप्रकोपबाट बच्न बचाउन र घटनापछिको डिज्यास्टर म्यानेजमेन्टमा सम्बन्धित राष्ट्रले समयमै यथोचित ध्यान पुर्याउनु पर्ने देखिन्छ। मौसम सम्बन्धि पूर्ब जानकारी पूर्व सचेतता, पूर्व सावधानी र पूर्व तयारीका चुस्त शैलीहरूलाई व्यबस्थित पार्न सके यसरी ठूलो संख्यामा हुने धन जनको क्षतिलाई कम गर्न सकिदो हो।
Posted by Ram at 10:31 AM